The Best Corporation CRM avy amin'i Zeevou
Ny habetsaky ny famandrihana mivantana azon'ny mpikarakara fandraisam-bahiny tratrarina matetika dia miankina betsaka amin'ny orinasany orinasa. Na izany aza, tsy haingana ny fananganana famandrihana orinasa marobe avy amin'ny mpandraharaha ara-barotra. Ny fiantohana ny fivezivezena maharitra ataon'ny mpitsidika orinasa dia afaka maharitra taona maro hifandraisana amin'ireo orinasa sy fananganana fifandraisana mifototra amin'ny fahatokisana sy serivisy ho an'ny mpanjifa tena mifanaraka amin'ny filan'izy ireo.
Raha maro ny mpandraharaha fampiantranoana servisy no manana loharano hifandraisana amin'ireo orinasa sy hitondra famandrihana voalohany, ny ankamaroany tsy manana fitaovana sy ny teknolojia hanarahana tsara ny fandaniany, mitazona hatrany ny safidiny ary hahatakatra ny fifandraisan'ny mpiasa birao sy ny vahiny mifamatotra. amin'ny orinasa rehetra.
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou's Corporation CRM manampy?
Ankoatry ny built-in CRM vahiny, Zeevou koa dia namorona Corporation CRM. Amin'ny alàlan'ny fahombiazany Dingana fanamafisana ny famandrihana 5-dingana, Zeevou dia manampy mamantatra mora ny mpamandrika orinasa. Io dia ahafahan'ny mpamatsy tena misakafo manokana mamorona mombamomba ny orinasa tsirairay, ary manara-maso ny antsipiriany mifandraika amin'ny asa aman-draharaha, ny mpiasa ao amin'ny birao mametraka ny famandrihana, ary ny vahiny izay mitoetra ao amin'ny tranony.
Ny fananana kitay ivon'ny famandrihana sy ny fandoavam-bola rehetra mifandraika amin'izany orinasa izany dia mamela ny mpitantana ny hotely hikolokolo tsara ny fifandraisan'izy ireo amin'ny mpanjifany orinasa. Zeevou dia mamela anao ihany koa hanondro mpitantana kaonty isaky ny orinasa ampidirina ao amin'ny CRM Corporation, ary ampio naoty momba ny safidinao na ny takian'io mpandraharaha ara-barotra io.